ရေနွေးနဲ့ ခေါင်းလျှော်ရင် ဆံသားပျက်စီးနိုင်လား – My Doctor
You are here:Home-All Articles-အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ-အလှအပ-ရေနွေးနဲ့ ခေါင်းလျှော်ရင် ဆံသားပျက်စီးနိုင်လား
?ရေနွေးနဲ့ ခေါင်းလျှော်ရင် ဆံသားပျက်စီးနိုင်လား?
ခေါင်းလျှော်ခြင်းဆိုတာ လူနေမှုဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ တချို့ကတော့ ဘာရယ်မဟုတ် ခေါင်းလျှော်ရည်မရွေး ရေအေး ရေနွေးမရွေး လျှော်လိုက်ကြပေမဲ့ တချို့လူတွေမှာတော့ ဘယ်တံဆိပ်မှ ရေအေးမှ ရေနွေးမှ ဆိုတဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လည်း ရွေးချယ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ရည်တွေမှာလည်း ပါဝင်ပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီး အားသာချက် အားနည်းချက်တွေရှိသလို ရေအေး ရေနွေးမှာလည်း ထို့အတူပါပဲ။
ဘယ်အရာမဆို အလယ်အလတ် လမ်းစဉ်ကသာ အကောင်းဆုံးမို့ ချင့်ချိန်သုံးစွဲဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
?ရေနွေးနဲ့ခေါင်းလျှော်ရင် ဘာတွေဖြစ်မလဲ ??
ကောင်းတဲ့အချက်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ ရေနွေးက ချွေးပေါက်တွေကို ပွင့်စေပြီး ဂျီးကျွတ်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆံသားနဲ့ ဦးရေပြားကို ပိုသန့်ရှင်းစေပါတယ်။ မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ အညစ်အကြေးတွေနဲ့အတူ ဆံသား နူးညံ့ပျော့ပျောင်းပြီး တောက်ပစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ အဆီဓာတ်တွေပါ ပါသွားတတ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ဆံသားပါးလာတတ်သလို မွဲခြောက်ခြောက် ကျွတ်ဆတ်ဆတ် လည်း ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ပိုဆိုးတဲ့အချက်ကတော့ ဆံပင်ကျွတ်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
အပူဒဏ်ကြောင့် ဦးရေပြားခဏရောင်ရမ်းသွားချိန်မှာ ဆံပင်တွေကျွတ်လွယ်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
?ဒါဆိုဆံသားမပျက်စီးအောင် ဘယ်လိုခေါင်းလျှော်မလဲ ??
– ရေနွေးကို အရမ်းမပူစေဘဲ ကြက်သီးနွေးလောက်ပဲ ဖြစ်စေဖို့ သတိပြုပါ
– ဆံပင်ကျွတ်လွယ်တဲ့အတွက် ခပ်ကြမ်းကြမ်းခေါင်းလျှော်တာရှောင်ပါ
– ဦးရေပြားဆီ သွေးလှည့်ပတ်မှုပိုကောင်းစေပြီး ဆံသားရဲ့အပေါ်လွှာကြံ့ခိုင်မှုကို ပိုကောင်းစေဖို့ ခေါင်းလျှော်ပြီးချိန် အဆုံးသတ်မှာ ရေအေးပြန်လောင်းပေးပါ။
နှာစေးအအေးမိတာ မဖြစ်စေဖို့တော့ ရေသိပ်မအေးစေဖို့ သတိထားပါ။
ဆံသားအတွက်သာမကဘဲ ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံးကတော့ မပူလွန်း မအေးလွန်းတဲ့ ရေနဲ့ သိပ်မပြင်းတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်တွေက အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မှာပါ။
By tayzar|2020-04-15T13:22:46+00:00November 2nd, 2019|Categories: All Articles, အလှအပ, အလှအပနှင့်နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ|0 Comments